Muxuu UHURU Kenyatta ka yiri fadeexadda culus ee kusoo baxday qoyskiisa? | Dalkaan.com
Home Warkii Muxuu UHURU Kenyatta ka yiri fadeexadda culus ee kusoo baxday qoyskiisa?
Nairobi (dalkaan) – Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta ayaa Isniintii sheegay in baaritaanka kashifay hogaamiyayaasha caalamka ee lacagaha ku qarsaday dalal dibadda ah “uu sare u qaadi doono daah-furnaanta maaliyadeed,” hase yeeshee wuxuu diiday inuu ka jawaabo eedeymaha ku saabsan in qoyskiisa ay dibadda ku leeyihin 11 shirkadood uu u dhigma malaayiin dollar.
Previous articleMuxuu Uhuru ka yiri fadeexadda kusoo baxday qoyskiisa?
Next articleDaawo: Dagaal ka dhashay cunto lagu cunay maqaayad ku taal Muqdisho oo sababay dhimasho iyo dhaawac
Addis Ababa (Caasimada Online) – Su’aalo ayaa ka dhashay qaabkii uu ra’iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu u sharfay madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee...